Inqubomgomo Yokubuyiselwa Imali - GoViral
Sinikeza izimpahla ezingenakubonakala ezingenakwenzeka. Njengomthengi unesibopho sokuqonda lokhu uma uthenge noma yimiphi umkhiqizo / isevisi kusayithi lethu.
UKUSEBENZA UMSEBENZI WOMPHAKATHI
Izinkinga ze-99% zingalungiswa nge-imeyili elula. Siyacela ukuba usondele kithi usebenzisa "Xhumana nathi"Ikhasi. Umnyango Wezinsizakalo Zomakhasimende uzobuyela kuwe ngaphakathi kwe-24-48 (ngokuvamile ngaphansi kwamahora we-24) ngokubuyekeza kokukhathazeka kwakho, nesisombululo.
UKUSEBENZA OKUQALA KUFUNA
Ukungalethwa komkhiqizo / kwensizakalo: kwezinye izimo izikhathi zenqubo zihamba kancane, futhi kungathatha isikhashana ukuthi i-oda lakho liqede. Kulokhu, sincoma ukuthi uxhumane nathi ukuze uthole usizo. Izimangalo ngokungalethwa kufanele zithunyelwe eMnyangweni Wezinsizakalo Zamakhasimende ngokubhalwe phansi zingakapheli izinsuku eziyi-7 kusuka ekufakweni kwe-oda.
Umkhiqizo ongekho-ochaziwe: izinkinga ezinjalo kufanele zibikwe eMnyangweni wethu wezinkonzo zamakhasimende ngaphakathi kwezinsuku ze-7 kusukela ngosuku lokuthenga. Ukususa ubufakazi kufanele kuhlinzekwe ukuthi kufakazela ukuthi umkhiqizo / inkonzo ethengiwe akuyona into echazwe kwiwebhusayithi. Izikhalo ezisekelwe kuphela ekulindeni kwamanga kwamakhasimende noma izifiso azihlonishwa.
Ikhasimende lifisa ukukhansela ukukhokhwa okuphindayo komkhiqizo / kwensizakalo futhi kungakapheli izinsuku eziyi-7 kukhokhelwe okokugcina. Uma isicelo senziwa sokubuyiselwa imali ngemuva kwezinsuku ezingu-7 ikhasimende alifanelekile, kodwa ukukhansela kuzophothulwa kukho konke ukukhokhiswa okuzayo. Ikhasimende lingaqhubeka nokuthola insizakalo kuze kube sekupheleni komjikelezo wabo wokukhokha, noma likhethe ukumiswa ngokushesha komkhiqizo / kwensizakalo.
Sima ngemuva kwemikhiqizo yethu futhi siyaziqhenya ngokuletha izinsizakalo zokubambisana kwezokuxhumana kwezenhlalo ezisezingeni eliphezulu kunazo zonke namuhla. Asikwazi ukunikeza njalo ukubuyiselwa kwemali, kodwa uma kungakapheli izinsuku ezingu-7 awujabuli nge-oda lakho umane nje Xhumana nathi futhi sizothola isinqumo ekukhathazayo kwakho.
Thola ukubukwa kwamahhala kwe-YouTube, ababhalisile be-YouTube mahhala, ukuphawula kwamahhala kwe-YouTube nokuthandwa kwamahhala kwe-YouTube usebenzisa inethiwekhi yethu elula nephumelelayo.
Izinzuzo Zokusebenzisa i-GoViral